Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း ... မင်္ဂလာနှစ်သစ်, (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 33 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း ... မင်္ဂလာနှစ်သစ်, (ထုတ်လုပ်)
ကြှနျုပျတို့အားလုံးထံမှ ... မင်္ဂလာနှစ်သစ်။ (ထုတ်လုပ်)
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း။ ယခုတွင်ငါသည်ဤသို့ပြုရန်ရှိသည်။ ဤတွင်ရုပ်ဆိုးအလင်းအိမ်လာ! (ထုတ်လုပ်)
သင့်ရဲ့ DJ သမားကျောဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့တိုးတက်မှုအတွက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီပြန်လည်စတင်။ (ထုတ်လုပ်)
သငျသညျနံနကျနိုးလာတဲ့အခါ ... သင့်ရဲ့အိပ်ရာများတွင်တွေ့မြင်သောအရာကိုအဘို့ DJ သမားအပြစ်မတင်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး! (ထုတ်လုပ်)